Home » Lahatsoratra farany farany » Interviews » Interview: Inside ny sain'i Finnair CEO » Page 2
Airlines • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Interviews • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Miala tsiny, ahoana ny fampitahana ny isan'ny toerana itodiana 60 amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy?
Nialoha toerana 130 izahay talohan'ny krizy. Ka toerana 60 eo ho eo no midika fa hanana tamba-jotra somary malalaka isika, saingy mazava ho azy fa kely kokoa ny fahita matetika ary tranom-borona kely kely kokoa noho ny mahazatra. Ka noho izany ny fahaiza-manao amin'ny fahavaratra dia mety ho kely kely kokoa noho ireo tanjona 60 voalaza marina.
Ary ny haben'ny entana dia ambany dia ambany, ny tarehimarika momba ny entana tamin'ny volana aprily izay hitako dia 26%. Ka na ny fahaizanao nampiana aza dia tsy ho fenoinao intsony. Misy ve ny adihevitra momba ny fanaovana ny fahaiza-manao na dia kely noho ny nataonao aza?
Tena henjana tokoa izahay momba ny fisidinan'ny fisidinana ka aleo izahay manidina toy izay tsy manidina. Ka noho izany dia nohamafisinay fa izany, saingy mazava fa indrindra amin'ny fifamoivoizana lavitra, miaraka amin'ny fanavotana an'i Shanghai, dia nahomby tamin'ny taona latsaky ny taona izahay teo amin'ny lafiny entana, ary eo no ilana ny fangatahan'ny entana, ary izany dia manohana ny fisidinan'ny vola izay nataonay.
Ka niverina ho any amin'ny entana ihany koa aho, fa ny halavirana lava no resahinao, ary niresaka momba ny làlana mankany amin'ny faritra Azia ianao ary indrindra any Chine. Ary mazava ho azy fa ny paikadin'i Finnair ho an'ny tetikady ifotony amin'ny lafiny maro dia ny mampifandray an'i Eoropa amin'ireo toerana itodiana any amin'ny faritra Azia. Ary heveriko fa talohan'ny COVID, Eoropa ary Azia no misy ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fivezivezenao, ny vola miditrao, miaraka amin'i Amerika Avaratra sy any Failandy any an-toerana misy fandraisana anjara kely kokoa. Saingy amin'izao fotoana izao, mazava ho azy, ny ao an-trano no faritra lehibe indrindra, arahin'ny sidina fohy Europe, ary ny halavirana lava dia tena kely. Saingy ny fahatsinjovana fiverenana amin'io paikady fampifandraisana an'i Eropa amin'i Azia io, rahoviana ianao no miverina amin'ny zavatra akaiky ny ambaratonga talohan'ny COVID?
Ie, heveriko fa ny tombantombantsika dia, amin'ny lafiny fahaiza-manao, ASK, hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID isika amin'ny '23, ka afaka roa taona izao. Ary amin'ny ankapobeny, raha mijery an'i Finnair ho toy ny zotram-piaramanidina ianao, araka ny nambaranao, amin'ny maha-zotram-piaramanidina antsika, isika rehetra dia tokony hampifandray an'i Eoropa sy i Azia amin'ny alàlan'ny zotra fohy avaratra, amin'ny alàlan'ny hub Helsinki. Ary manana tsena anatiny isika, ary azo antoka fa misy fiatraikany amin'ny tarehintsika ankehitriny. Hitanay ihany koa fa mety hisy fanemorana kely eo amin'ny lafiny Azia tena hisokatra. Mandeha miadana kokoa ny fandrakofana fanaovam-baksiny any Azia noho ny any Eropa. Ary izany dia miteraka fahatarana amin'ny ankapobeny. Noho izany ny fangatahana dia hanomboka amin'ny halavirana fohy any Eropa, ary araka ny voalaza, i Amerika Avaratra dia mety ho manan-danja kokoa noho ny toerana lavitra halavantsika mandritra ny enim-bolana manaraka.
Okay, fa tsy afaka miverina tanteraka amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID ianao mandra-pisokafan'i Azia indray.
Marina izany. Izany no zava-misy amintsika. Fa avy eo indray, mandritra ny fotoana fohy, mandritra ny fotoana maharitra, dia miorina amin'ny fanolorantenantsika ny paikadin'i Azia izahay. Raha jerenao ny fivoaran'izao tontolo izao aorian'ny areti-mandringana, dia toa mivoaka ho mpandresy amin'ny areti-mandringana, entin'i Shina ny toekarena lehibe aziatika. Ary ny fiovan'ny toekarena eran'izao tontolo izao dia miha mandroso hatrany mankany Azia, ary ny fanaovana tanàna ho fironana mega  dia midika fa hisy tanàna vaovao mega any Azia, indrindra any Chine, ho an'ny sidina fiaramanidina, i Finnair no hanompoana. Ary heveriko fa ireo fironana mega ireo dia tena hanohana antsika mandritra ny fotoana maharitra. Ka manolo-tena amin'ny paikadinay izahay.
Hatraiza ny lanjan'ny fifamoivoizana premium aminao ary noho izany dia olana lehibe aminao izao, satria tsy dia miasa loatra ny fifamoivoizana premium.
Eny, amin'ny maha-zotram-piaramanidina anay, somary tsy dia miraharaha ny dia ataon'ny orinasa isika noho ny sasany, ohatra, ny mpitatitra fiaramanidina eropeana. Tamin'ny taona 2019 dia nisy 20% ny mpandeha tao aminay, 30% ny vola azonay. Noho izany dia miomana amin'ny sasany amin'izany izahay fa tsy hiverina atsy ho atsy, ary mandaitra tokoa ny dia ataon'ny orinasa mitady lalam-baovao ary avy eo manomboka mitombo avy eo. Saingy heverinay fa ny fialam-boly premium dia ho zava-dehibe kokoa ho antsika amin'ny lafiny iray handroso, ary vonona izahay hampiditra kilasy fihenan-karena ara-toekarena vaovao amin'ny sambo fitaterana lavitra antsika mandritra ny taona manaraka.
Okay. Hitanao ve ny fangatahana izany ho avy bebe kokoa amin'ny fifanakalozana mpandeha ara-toekarena na ny olon-tsotra mifanakalo varotra?
Heveriko fa ho hitantsika kely ny roa amin'izy ireo, saingy azo antoka fa mifantoka amin'ny fiakarana isika, noho izany ny olona avy amin'ny toekarena dia mifindra amin'ny toekarena premium, ary rehefa mijery ireo famantarana voalohany isika, taorian'ny fiverenan'ny fangatahana taorian'ny areti-mandringana, azontsika atao tsara ny mahita fa toa misy ny finiavana eo amin'ireo mpanjifa handoa vola kely kokoa. Ka ny mpanjifa dia hifantoka bebe kokoa amin'ny serivisy sy kalitao ary habaka manokana ao anaty fiaramanidina ho ampahany amin'ny traikefa an-sidina. Ary araka ny voalaza, ireo fironana ireo dia manohana ny fiheverantsika ny fialamboly premium izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny fandrosoana.
Page 2 ny 6 Prev Manaraka